राजनीति सिंगो विश्वलाई स्थिरता दिने एउटा अभ्यास हो । तमाम नीति, व्यवहार र प्रचलनहरूलाई व्यवस्थित गरी सोही अनुसारको नीति बनाएर अघि बढ्ने राजनीतिको अहिलेको परिभाषा र वैदिककालीन अर्थ फरक छ । राजनीतिलाई अहिले अध्यात्मवादलेभन्दा अन्धवादले संचालन गर्छ ।
Monday, 03.23.2020, 09:03am
साम्राज्यवादीको चकचकी भएको बेलामा पनि आफ्नो पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाएर बसेको नेपाल आज नेपालीहरुकै अविवेकले गर्दा शंकटापन्न अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने जगजगी भएको छ ।
Wednesday, 02.12.2020, 12:23pm
स्वस्थानी व्रतकथा अनुसार आफ्नी अर्धाङ्गीनि सतिदेवीले दक्षप्रजापतिको यज्ञकुण्डमा हामफालेर देह त्याग गरेपछि विक्षिप्त बनेका महादेवले आफ्ना सेना पठाएर दक्षको यज्ञ विध्वंश गरिदिए । दक्षको शिर काटेर यज्ञकुण्डमा होमिदिए । पछि उनै महादेवले दक्षकी पत्नीको अनुनय सुनेर बोकाको शिर दक्षको शरीरमा जोडिदिए ।
Wednesday, 02.12.2020, 12:21pm
“एकैपटकको जुनी हो, नराम्रो काम नगर है” भन्थे बूढापाकाहरु । तर हिजोआज कसले सुने ? पहिलेका मान्छे नाम कमाउनुपर्छ भन्थे भने आजका दाम कमाउनपट्टि दगुरिरहेका छन् । दाम कमाएपछि नाम त्यसै कमिन्छ भनेर दामका पछि दगुर्नेहरु नाम त कताकता, बदनाम भएको पनि देखिएकै छ । यो कमाउने रोगले गर्दा जीवनमा गर्नुपर्ने काम थाहै नपाई जानेबेला भैसकेको पनि थाहा नपाउने हुँदा रहेछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही पूर्व मन्त्रीहरूसहित १ सय ७५ जनाविरूद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेपछि देशमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । गत कार्तिकमा भारतले नेपालको अखण्ड भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३७२ वर्ग किलोमिटर जग्गा आफ्नो सरहदभित्र पारेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि सम्पूर्ण देशवासी एकजुट भएर त्यसको विरोध गर्दै अतिक्रमित नेपाभूमि फिर्ता गर्न र कालापानीमा जबर्जस्ती बसेका भारतीय सेनालाई हटाउन देशव्यापी रुपमा आवाज उठाएका बेला मुलुकमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको थियो । त्यो चर्चालाई शिथिल पार्दै ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ नामको सहयोग लिने र लिन नहुनेबारे मुलुकमा अर्को बहस छेडियो र यसले अझै उपयुक्त निकास पाउन बाँकी नै छ ।
Wednesday, 02.12.2020, 12:19pm
दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो, विदेशी मुद्राको र भुक्तानी सन्तुलनको एकमात्र आधार “देशभित्रको वस्तु निकाशी” नै हो । भलै उहिले दाल, चामल, काठ, तोरी र कार्पेट (गलैंचा) जुट घरेलु हस्तकला मूर्ति कलाका सामग्रीहरु निकाशी गरिएको थिए । तर अहिले ती सबैको निकाशी निकै शून्य प्राय वा न्यून छ ।
» तीन महिनाभित्र माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरदि सम्झौता हुने
» प्रेरणाले दाबी गरेको दाइजो ः ट्रष्टकै सम्पत्ति भएको ठहर
» बरु चीनमै उपचार गरौं
» नेपालमा चियाको इतिहास कोरेको कारखाना जीर्ण
» जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा अधिक परिरहेको
» पीताम्बर–विष्णुराज्य वाङ्मय सम्मान डा. महेश्वर शर्मालाई
» प्रेम दिवसमा खाना महोत्सव
» ४० प्रतिशतलाई अस्पतालभित्रै संक्रमण
» एमसीसी र सूचना प्रविधि विधेयकवारे तातो बहस !
» शिवमायाको अडानले नेकपालाई दिएको चुनौति
» भारतले वेवास्ता गरे पनि नेपालको तयारी तीब्र
» १४ अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने अनेक दाउपेच !
» पृथ्वीजयन्तीको सान्दर्भिकता
» विदेशीले माया गरेर सहायता दिने हैन - यादब देवकोटा
» जनकपुरधाम धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्दै – अजयकुमार साह
» पाँच सयमा हुने मर्मतलाई किन ८ हजार पु¥याइन्छ ?
» सरकारले फितलोपन देखाउन हुँदैन - महेश्वर शर्मा
» सत्तामा पुगेर मैंमत्ता नवन, मित्रहरु !- तारा सुवेदी
» सामाजिक सुरक्षाबारे रोजगारदाताले भ्रम फैलाएको आरोप
Page 1/118: 1234567 ... :: »